Mukhtaar Roobow oo is dhiibay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMukhtaar Roobow oo is dhiibay
August 13, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Mukhtaar Roobow oo is dhiibay. [Sawirka: Archive]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab Mukhtaar Roobow ayaa aqbalay in uu isku dhiibo dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay xaqiijiyeen masuuliyiin.
Is dhiibida ayaa timid kadib kulan ay albaabadu u xirnaayeen oo dhexmaray masuuliyiin ka socota dowladda federaalka Soomaaliya iyo Roobow, kaasoo ka dhacay tuulada Abaal, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Maleeshiyaad Al-Shabaab katirsan iyo dagaalyahano daacad u ah Roobow ayaa ku dagaalamayay Abaal ilaa Jimcadii.
Abaal waa tuulo yar oo kutaala gobolka Bakool, oo ay ku xooganyihiin qabiilka Roobow ee “Raxan-weyn”.
Kadib go’aanka Mareykanka, Al-Shabaab ayaa bilowday guluf ka dhan ah Roobow si ay u qabtaan ama u dilaan.
November 5, 2016 Qaramada Midoobay: Al-Shabaab wali waxay khatar ku tahay Soomaaliya
Ankara-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa marlabaad shaqada ka cayrshay 10,000 shaqaale dowli ah waxana uu xiray in ka badan 15 xarumo warbaahineed ah oo looga shaki qabo in ay xiriir la leeyihiin “ururo argagixiso” iyo wadaadka [...]